« Teny Tamponketsa no niseho ny loza, tsy nisy aina nafoy, nisy ny folaka sy ny voadona ara-tsaina », hoy ny fampitam-baovaon’ny mpitandro filaminana. Tamin’ny 1 ora maraina vao tonga ny fiara namonjy. Niteraka hatezerana ho an’ireo mpandeha ny tsy firaharahiana azy ireo tany Mahajanga fa ny entana izay nandrasan’ireo mpitsena no nahamaika ny tompon’andraikitry ny koperativa. « Anjara andraikitry ny tompon’ny fitaterana anefa ny manontany ny tsy fahasalamana sy ny fitsaboana vao ny entana », raha ny filazan’ny ATT izay mpiandraikitra ny fitaterana an-tanety. Raha ny filazan’ny mpandeha anefa, noho ireo entana tafahoatra teo ambony fiara no nampianjera ilay fiara teo amin’ny fiolahana. “ Efa tao anatin’ny torimaso ny ankamaroan’ny mpandeha izay niainga ny takariva teny Andohatapenaka ho any Mahajanga. Ny fidobohan’ny fiara narahin’ny kiakiaka no nanaitra. Raim-pianakaviana iray no saika tsy niverina ny sainy. Fihodinana ilay lalana ary nisy tatatra ka izay no nampironjona ilay taksibrosy”, hoy i Tantely, anisan’ireo mpandeha nieren-doza nitantara ny zava-nitranga. Nilaza ny zandary ao Ankazobe fa mirimorimo loatra ireo fiara amin’iny lalam-pirenena iny fa tsy resaka lolo no mahatonga ny loza.